၀၈-၀၃-၂၀၁၈ မှ ၂၂-၀၄-၂၀၁၈ ထိ
Vacation Hotel Yangon ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ
No.68, Hledan Street, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar.
Phone : (+951)212824, (+959)440026521, (+959)440026531
Email : info@vacationhotelyangon.com
Website : www.vacationhotelyangon.com
Facebook Page :  https://www.facebook.com/vacationhotelyangon/
Vacation Hotel Yangon ၏ အမှာစကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ Vacation Hotel Yangon မှ ဖြစ်ပါတယ်။
Vacation Hotel Yangon ရှိ Standard Room တွင် နှစ်ယောက် (၁)ညတည်းခိုခွင့်ကူပွန်အား ကံထူးရှင်(၁)ယောက် အတွက် မဲဖောက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေး ဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း Vacation Hotel Yangon မှ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါ သည်။ Vacation Hotel Yangon တွင် ရရှိနိုင်သော အခန်းများနှု့် ၀န်ဆောင်မှုများအား အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
❀ ချစ်သော customer များ ❀
ရန်ကုန်ကို ဘာအကြောင်းနဲ့ လာမှာလဲ?
ဒါမှမဟုတ် စီးပွားရေးကြောင့်လား ?
မိသားစုနဲ့ဘုရားဖူးလာမှာလား ?
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ ဖို့ လား ?
ရန်ကုန်က bars တွေ Clubs တွေမှာ ကဲပြီး ညမိုးချုပ် သန့် ရှင်း သပ်ရပ်တဲ့ စိတ်ချရတဲ့ hotel ကိုရှာနေပါသလား ?
ဒီမှာအားလုံးအတွက် Vacation hotel နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးပါရစေ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ Vacation Hotel ဟာ ရန်ကုန်မြို့ ထဲ လမ်းမတော် မြို့ နယ်မှာ တည်ရှိပြီး သွားလာ ဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူ သောကြောင့် နန်းဆန်တဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သား မြို့ သူမြို့ သားများ ကျွန်တော်တို့အောက်မြန်မာပြည် ရွှေရန်ကုန်ကို အလည်တစ်ခေါက် ရောက်လာခဲ့ရင် လာရောက်တည်းခိုဖို့ ဖိတ်ခေါ် ပါရစေ လားဗျာ။ Room Charges လေးတွေလည်း သိပ်မများပဲ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး လွတ်လပ်စွာ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူလို့ရပြီပေါ့..
Standard Room - 28000 kyats
Superior Room - 36000 kyats
Superior family - 48000 kyats
(All above rates are not including breakfast)
Hotel မှာပဲသက်တောင့်သက်တာ breakfast စားချင်သူများအတွက်လည်း A La Carte buffet breakfast menu (All you can eat) ဘူဖေးကို တစ်ယောက် (2500) ကျပ်
နှုန်းဖြင့် အားပေးနိုင်ပါတယ် ခင်မျာ
Remark : outside guest 5000 for one ticket
Normal/walk-in rate for foreigners
Standard Room - 28 USD +5USD (breakfast)
Superior - 35 USD +5USD (breakfast)
Superior family - 50 USD +5USD (breakfast)
Agoda / Booking.com / Expedia / Jovago / Loddgy Online Agents များထံမှလည်း Booking လုပ်နိုင်ပါတယ်
အလုပ်ကြောင့် လနဲ့ ချီ ကြာမြင့်တတ်သူများ အတွက်လည်း Long Stay Special Rate များ ပေးနေပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့downtown area ထဲတွင် တည်ရှိပြီး check point များဖြင့်လည်း အလွန် နီးသောကြောင့် Foreigners များ အလွန် သဘောကျစေသော နေရာကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် Travels tours companies များ NGOs organization များ အတွက်လည်း Contracts ပေးခြင်း Cooperation များအတွက်လည်း Corporate prices များ ပေးခြင်းများကို အထူး လျော့ဈေးဖြင့် ပေးနေပါတယ် ခင်ဗျာ။ (လက်ရှိတွင် Travels tours companies 20 ခုခန့် , companies ကြီး ၅ ခုနှင့် contracts ချုပ်ပြီး)
အခန်းပုံများကိုလည်း Hotel Page ထဲတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး4stars အဆင့် Hotel duvet linens များကိုသာ သုံးထားပါတယ်။ (အိပ်ယာခင်းများကို bed sheet အဖြူနဲ့စောင်နဲ့ ခင်းခြင်းမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ပါ)
- 24 Hours Room Servie
- SmokingÃ‚Â Area
- Hotel Limousine Car
- Safety & Security Service
- Multi Channel Television
- Bottel Of MineralÃ‚Â Water (FOC)
- Inroom slipper